Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada ka imanaya Almaty kuna socda New Delhi ee Air Astana hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Hindiya • Wararka Kazakhstan • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Air Astana waxay bixisaa isku xirka rakaabka ka safraya Kyiv, Bishkek, Istanbul, Tbilisi iyo Baku.
Air Astana waxay dib u bilaabi doontaa duullimaadyadii Almaty ilaa New Delhi, caasimadda Hindiya, 16-ka Diseembar 2021, oo leh saddex adeeg todobaadkii oo ay maamusho diyaaradda Airbus A320.
Ka bixida Almaty maalmaha Talaadada, Khamiista iyo Sabtida waxaa loo qorsheeyay 07:50 oo imaanshaha New Delhi saacada 11:10, duulimaadka soo noqoshada 12:20 iyo imaatinka Almaty 16:40 Waqti kasta oo maxali ah, oo leh wakhtiga duulimaadka ee 3 saacadood iyo 50 daqiiqo jiho kasta.
Hawada Astana Waxay siisaa isku-xir ku habboon rakaabka ka safraya Kyiv, Bishkek, Istanbul, Tbilisi iyo Baku.
Macluumaadka Safarka / Shuruudaha Gelitaanka
Dhammaan rakaabka u safraya New Delhi oo ay ku jiraan carruurtu waxay u baahan yihiin inay buuxiyaan foomka khadka tooska ah ee garoonka diyaaradaha New Delhi. Rakaabka ka weyn 5 sano waxa kale oo ay u baahan yihiin in ay soo geliyaan natiijooyinka baaritaanka PCR oo leh natiijo xun oo la helay 72 saacadood gudahood ka hor intaysan iman. Kahor intaadan fuulin bixitaanka iyo mar labaad ka dib imaatinka, rakaabku waxay mari doonaan nidaamka tijaabada heerkulbeegga. Xaalad kasta oo calaamado ah oo ah in la ogaado coronavirus-ka, rakaabka waxaa loo diri doonaa goob caafimaad.
Rakaabka aan la tallaalin ama qayb ahaan la tallaalin ayaa looga baahan yahay inay qaataan baaritaanka COVID-19 markay yimaadaan oo ay ku celiyaan dhammaadka toddoba maalmood oo karantiil guriga ah. Rakaabka si buuxda loo tallaalay waa laga dhaafay baaritaanka PCR marka ay yimaadaan iyo karantiil guriga.